बुट्रागो डेल लोजोया र यसको आकर्षणहरू यात्रा समाचार
यदि तपाइँ मनपराउनुहुन्छ मध्यकालीन शहरहरू राम्रो मनोरन्जन गन्तव्य हो बुइट्रागो डेल लोजोया, म्याड्रिडबाट टाढा छैन र विगत शताब्दीहरूका सबै आकर्षणको साथ। सत्य यो हो कि स्पेनमा धेरै यस्ता पुराना र सुन्दर शहरहरू छन् जुन सांस्कृतिक चासोको आनन्द लिन्छन् र भ्रमणको लागि आमन्त्रित गर्दछन्।
आज हामी सियरा डि ग्वाडारामाको खुट्टामा गयौं, यो नगरपालिकालाई जान्न को लागी यसको जग बसालिएको छ र समयमै हराउँछ र हामीलाई प्रस्ताव गर्दछ, यही कारणका लागि, एक धेरै धनी सांस्कृतिक सम्पदा।
1 बुइट्रागो डेल लोजोया
2 बुइट्रागो डेल लोजोयामा के हेर्ने
बुइट्रागो डेल लोजोया
गाउँ म्याड्रिडको समुदायको हो, जनसंख्या संख्यामा तेस्रो र जनसंख्या घनत्वमा पहिलो किनकि यसले राष्ट्रिय राजधानी समावेश गर्दछ। लोजोया नदी नजिकैबाट बग्छ, शहरको चारैतिर घुम्छ र कोमल र पहाडी पहाडहरूले ओगटेको उही परिदृश्यमा रts लगाउँदछ, लगभग चुचुराहरू बिना र होल्म ओक, बीच र ओकको जंगलको साथ। यो कुनै श doubt्का बिना, एक सुन्दर पोस्टकार्ड र हामीले देख्न सक्ने सब भन्दा सुन्दर एउटा हो म्याड्रिडको नजीक.
शहरको स्थापना, हामीले माथि भनेझैं, निश्चितका लागि ज्ञात छैन तर केही ऐतिहासिक सन्दर्भहरूको कुरा हो रोमन उत्पत्ति जसमा एउटा ढु stone्गा पनि छोडिएको छैन। न त मध्यपूर्वको बाँकी छ रिकन्केस्ट फेला पर्नु भन्दा पहिले, तर बुट्रागो निस्सन्देह Alfonso VI को समयमा उपस्थित, वर्ष १००० को अन्त्य तिर.
त्यस समयमा, बुइट्रागोको सहरी क्षेत्र के हुने भन्ने बारे पहिलो निर्माणहरू a860० देखि १२०० मिटर माथि उपत्यकाको बीचमा दुई जलाशयहरूको बीचमा नदीको वक्रमा एक प्रमोन्टरीमा निर्माण गरियो। समुद्रबाट।
यो अल्फोन्सो VI हो जसले nascent सहरलाई क्षेत्र जनसंख्या गर्न आदेश दिन्छ र यसैले यसलाई शक्ति र हतियारको कोट प्रदान गर्दछ। पछि, यी क्षेत्रहरू एन्रिक द्वितीयको आदेशले गोन्जालेज डे मेंदोजा परिवारको हातमा पर्ने थियो र अन्तत: तिनीहरू इन्फान्टाडोको ड्यूक्सको पदवी धारक बन्नेछन्। तर बुइटरगो डेल लोजोया सहर कस्तो छ?
राम्रो पुरानो अंश छ, तथाकथित विला, जुन पर्खाल घेरा भित्र छ के को माथिल्लो भाग हो र त्यो अरब प्रभुत्व को समय बाट हुन सक्छ। तर यो सानो छ, त्यसैले बुइट्रागो महत्त्वपूर्ण transhumance पथमा भएकोले, यो चाँडै संतृप्त भएको हुनुपर्दछ। यसैले बाहिरी छिमेकको दृश्य, एउटा नदीको किनारमा, अन्डारियो भनिन्छ, र अर्को दक्षिणपट्टि सान जुआन भनेर चिनिन्छ।
यो सहरी डिजाइन, जसमा धेरै पेरिशहरू सामेल छन्, हामी आज पनि देख्न सक्छौं। सबैभन्दा मूल्यवान वा धनी निर्माणहरू मन्डोजा परिवारको मितिबाट शक्ति पायोत्यो भनेको पन्ध्रौं र सोह्रौं शताब्दी भनेको छ। सानो शहर पछि नेपोलियनको आक्रमण नभएसम्म शहर बद्लिनेछ जसले पर्खालहरू र यसको भित्री भागहरू जलाउनेछ। विनाश र उपेक्षाको सन्दर्भमा पनि, बीसौं शताब्दीमा मुख्यतया गृहयुद्धले गर्ने थियो।
१ 1931 .१ मा यसको पर्खाल घेरा अन्तमा घोषणा गरियो राष्ट्रिय स्मारक र १ 1993 XNUMX since देखि सम्पूर्ण ऐतिहासिक केन्द्र मानिन्छ ऐतिहासिक - कलात्मक जटिल र सांस्कृतिक चासोको राम्रो।
बुइट्रागो डेल लोजोयामा के हेर्ने
राम्रो पहिलो कुरा पहिले: यो पर्खाल संलग्न यो ११ औं शताब्दीदेखि शुरु भएको मुसलमान मूलको मोती हो र जुन भाग्यवस, पुनर्निर्माण गरिएको छ। भित्ता 800०० मिटर यात्रा गर्नुहोस् र छ दुई पदयात्रा, एक उच्च र एक कम। तल्लो पदयात्रा नदीको समानान्तरमा चल्छ र दुई मिटर बाक्लो हुन्छ र केवल छ मिटर अग्लो। यससँग केही पनि छैन, एउटा टावर छैन, साथ साथै केही बटनहरू पनि छन्।
यसको अंशको लागि, अग्लो पैदल मार्ग पर्खालको दक्षिणपश्चिमी र दक्षिणपट्टि चल्दछ। यो केहि पोइन्टमा १ 16 मिटर बाक्लो छ र औसत नौ मिटर अग्लो छ। यो एक छ खुन, बुर्ज, धरहरा, अल्काजार, बार्बिकन र कोरचा। आज सम्म, टावरहरू लगभग पूर्ण रूपमा आइपुगे, बार्बिकनको केवल केही टावरहरूको खण्ड मात्र बाँकी छ, खनजोरको समान तर यो हाइलाइट गर्न आवश्यक छ को संरक्षणको उत्कृष्ट राज्य खोल, सम्पूर्ण महाद्वीपमा एक उत्तम हो।
दोस्रो हो बुित्रो क्यासल। मूल रूपमा एक दुर्ग, हामीले देखेको आर्किटेक्चरल कम्प्लेक्सको हो गोथिक - मुडेजर र १ dates औं शताब्दीको मितिहरू। यो केन्द्रको सुन्दर परेड मैदान छ, आयताकार डिजाइन र सात इम्पोजिing टावर जुन एक अर्का भन्दा फरक छन्। गढीबाहिर, भवनले दरबारको रूपमा पनि काम गर्‍यो, त्यसैले यसको भित्री भागमा छत र प्लास्टरवर्कमा केही गुणहरू छन्।
मेन्डोजा परिवारले उनीहरूको लागि यस शहरलाई बहुमूल्य भवनहरू दिए। ती मध्ये एक हो वन हाउस, पारिवारिक मनोरंजन घर सत्रहौं शताब्दीको शुरुवातबाट शुरु भएको र परम्परागत इटालियन भिल्लाहरूको अनुकरण गर्दै। आज यो एकदम नराम्रो अवस्थामा छ र तपाईंले शहरको बाहिर दुई किलोमिटर यात्रा गर्नु पर्‍यो यसलाई हेर्न तर त्यसमा आफ्नै चीज छ। तिनीहरू पनि जिम्मेवार थिए सान्ता मारिया डेल कास्टिलोको चर्च, १ 1321११ देखि।
यो एकल नैभको साथ साधारण मन्दिर हो तर यसको टावर अग्लो र मुडेजर शैलीमा छ। आज यो चर्चको सानो वास्तविक अस्तित्व छ, एफएड, केही पर्खाल र धरहरा, किनकि यो गृहयुद्धको समयमा जलाइएको थियो। बाँकी पुनःस्थापना गरियो। अर्कोतर्फ अरराबल ब्रिज जसले नदीलाई पार गर्छ र पर्खाल घेरा एन्ड्रियाको पुरानो जिल्लासँग जोड्दछ। उसलाई थाहा थियो कि कसरी एक्वाइडक्टको रूपमा सेवा गर्ने र अधिक वा कम।
अन्तमा, हामी यसको बारेमा कुरा गर्न सक्छौं पिकासो संग्रहालय। कलाकारको कपाल, पनि एक साथी, बुित्रगो निवासी थिए र शहर मा आफ्नो कामहरु को केही दान। संग्रहालय १ 1985 60 मा खोलियो र ket० कार्यहरू छन् स्केचहरू, सिरेमिक्स र प्रिन्टहरू सहित। आज यो प्रस्ताव गर्दछ नि: शुल्क गाईड टुरहरू यसका सबै अस्थायी प्रदर्शनहरूमा। यी आइतवारहरू हुन्, अगस्ट बाहेक, दिउँसो १२ बजे।
तर बुट्रागो डेल लोजोया यसको लागि पनि परिचित छ धार्मिक चाडपर्व दुर्गम घुम्न राम्रो मौका Mad 75 किलोमिटर जुन यसलाई म्याड्रिडबाट अलग गर्दछ यो बिदाको लागि हो।
१ 80 s० को दशक पछि देखि, छिमेकीहरूले एक लोकप्रिय संगठित छ बस्ने बेलेन जसमा २०० भन्दा बढी व्यक्तिहरू सहभागी हुन्छन् र धेरै दृश्यहरू शहरको ऐतिहासिक स्थानहरूमा पुन: निर्माण गरिन्छन्। यो देखि धेरै मान्छे आकर्षित भएको छ त्यसैले यो एक भयो ठूलो पर्यटक घटना.
त्यहाँ पनि छ कर्पस क्रिस्टी, हाम्रो लेडी अफ एस्प्शन र स्यान रोकेको पर्व। शहरले र a्गीन पनि आयोजना गर्दछ मध्ययुगीन निष्पक्ष २००१ देखि। यो सेप्टेम्बरको पहिलो सप्ताहन्तमा हुन्छ र हजारौं मानिसहरू मध्ययुगीन विगत र यसको चलनहरू सम्झन आउँदछन्। सबै चीज संगीत, ग्यास्ट्रोनोमी, थिएटर र ती पुराना सडकहरूमा सेट अप भएका स्टालका वरिपरि घुम्छ।
तपाईमले देख्न सक्नुहुनेछ, म्याड्रिडबाट एक सय किलोमिटर भन्दा कम तपाईसँग थाहा पाउन एउटा शहर आकर्षण छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » España » बुट्रागो डेल लोजोया र यसको आकर्षणहरू
अस्टुरियसमा कोभाडong्गाका तालहरू